आश्चर्यजनक प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड डिजाइन गर्नका लागि प्रो सुझावहरू - Print Peppermint
घर / डिजाइन ब्लग / असंगठित / आश्चर्यजनक प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरू डिजाइन गर्न प्रो सुझावहरू
व्यवसाय कार्डहरू पछिल्लो केहि दशकहरुमा एक गम्भीर क्रान्तिको आनन्द उठाएका छन्। अब यी पेशेवर स्न्यापशटहरु मा छापिएका छन् कार्डस्टक एउटै संग, सबै बोर्ड भर मा नरम लेआउट।
यदि तपाइँ विकल्पको अन्वेषण गर्दै हुनुहुन्छ प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरू, तपाइँ केहि टिकाऊ कि अतिरिक्त टिकाऊ को लागी खोजिरहेको हुन सक्छ वा तपाइँ भीड बाट बाहिर उभिन मद्दत गर्दछ। सबै प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरू निश्चित रूप मा ती लक्ष्यहरु को दुबै पूरा हुनेछ, तर त्यहाँ अझै पनी केहि विशेष डिजाइन सुझावहरु जब तपाइँ तपाइँको विशिष्ट कार्ड बनाउन को लागी पालन गर्नु पर्छ।
पारदर्शिताका साथ खेल्नुहोस्
छवि स्रोत: https://creativemarket.com/Marvels/186730-Plastic-Photographer-Business-Card
एक भएको सबैभन्दा ठूलो फाइदाहरू मध्ये एक प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड हो कि यो हुन सक्छ पारदर्शी र बिभिन्न खण्डहरुमा अपारदर्शी। एक हड़ताली डिजाइन बनाउन मा तपाइँको लाभ को लागी यो प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ एक कम्पनी हो कि आत्माहरु distills हुनुहुन्छ, तपाइँ पुरा तरिकाले हुन सक्छ पारदर्शी केहि राम्रो तरिकाले डिजाइन बोतलहरु संग तपाइँको ब्रान्डि and र रंग को विशेषता कार्डहरु। प्रत्येक उद्योग फरक संभावनाहरु पैदा गर्दछ यदि तपाइँ उनीहरु लाई तपाइँको दिमाग खोल्नुहुन्छ।
जब यो रंगमा आउँदछ डार्कलाई सोच्नुहोस्
दिन को जीवन को लागी तपाइँको दिन मा, तपाइँ व्यक्ति को एक पेस्टल प्रकार हुन सक्छ। सायद तपाइँ नरम बोल्ने, नाजुक हुनुहुन्छ, र केवल सामान्यतया रंग को प्रतिबिम्बित हुन्छ कि प्रतिबिम्बित। जब यो आउँछ प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरू, कि प्राथमिकता एक तरफ धकेल्ने प्रयास गर्नुहोस्।
किनभने एक प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड अधिक कम्तिमा केही पारदर्शी हुनेछ (तपाईले रोज्नु भएको प्लास्टिकको प्रकारमा निर्भर गर्दछ), बोल्डर र lहरू फिक्का भन्दा धेरै स्पष्ट देखिनेछ। यो भन्नुको मतलब यो होइन कि तपाइँ तपाइँको व्यापार कार्ड सबै बनाउनु पर्छ कालो, यसको मतलब यो हो कि तपाईंले जुन मस्तिष्क पहिले नै दिमागमा रहेको जुनसुकै र dark्ग रंगहरूतर्फ लाग्नु पर्छ।
बक्स बाहिर जम्प
तपाईं स्पष्ट रूपमा परम्परामा टेदर गरिएको हुनुहुन्न यदि तपाईं प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड खरीद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए किन यसलाई अतिरिक्त माईल नलगाउनुहोस् र वास्तवमै अद्वितीय केहि डिजाईन नगर्नुहोस्?
यदि तपाईं बैंकर हुनुहुन्छ भने, उदाहरणको लागि, तपाईं पहिलो व्यवसायिक डेबिट कार्डसँग मेल खाने तपाईंको व्यवसाय कार्ड डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ।
फेरी एक पटक, प्रत्येक उद्योगले वास्तवमै रचनात्मक हुनको लागि बिभिन्न विकल्पहरू राख्दछ, त्यसैले वरिपरि फ्याँक्न डराउनु हुँदैन विचार.
अवश्य पनि, तपाईं न्यूनतम डिजाइनको साथ गलतमा जान सक्नुहुन्न, विशेष गरी यदि यदि तपाईं तिनीहरूको उच्च स्थायित्वका कारण प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरू चयन गर्नुभयो भने।
खाली ठाउँ र आफैंमा धेरै हडताल गर्न सकिन्छ। अझै पनि, यदि तपाइँ श्रम क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ (जस्तै ठेकेदार वा इलेक्ट्रीशियनको रूपमा), तपाइँको कडा ब्यापार कार्डसँग अलिकति रचनात्मक हुने ठाउँ छ, त्यसैले यदि तपाइँ वास्तवमै तपाइँको शैलीसँग पign्क्तिबद्ध छैन भने आफैलाई न्यूनतम बनाउनुहोस्। ।
आफ्नो हृदय सेट गर्नु अघि नमूनाहरूमा हेर्नुहोस्
साधारण तथ्य यो हो कि र colorsहरू प्राय: प्लास्टिकमा प्रिन्ट हुँदा तिनीहरू पर्दामा भन्दा भिन्न देखिन्छ; यसैले यो ब्राउज गर्नु महत्त्वपूर्ण छ नमूनाहरु तपाईं एक अर्डर गर्न प्रतिबद्ध गर्नु अघि।
प्लास्टिक कुनै पनि अन्य प्रकारको सामग्री भन्दा पूर्ण भिन्न पशु हो (विशेष गरी कागज), ताकि तपाइँका अपेक्षाहरू तदनुसार समायोजित हुनेछ।
मात्र होइन नमूनाहरु तिमीलाई राम्रो दिनुहोस् विचार कुन रंगहरूको तपाईंले प्रयोग गर्नुपर्दछ, तर तीनिहरूले तपाईंको दिमागमा केहि रचनात्मक अवधारणाहरू पनि स्पार्क गर्न सक्दछन्।
एकचोटि तपाईंले कम्पनीको व्याकुल गर्नुभयो नमूना प्याक, तपाईं एक स्पष्ट दृष्टि र अधिक विश्वास संग अर्डर गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
यदि तपाईं वास्तवमै उत्कृष्ट प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड डिजाइन गर्न सुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, आज सुरु गर्नुहोस्! हामी यहाँ छौं मदत बाटोको हरेक चरण ताकि तपाइँ तपाइँको जंगली सपनाहरु भन्दा राम्रो छ कि एक व्यापार कार्ड संग छोडिनेछ, र कि वास्तव मा तपाइँ प्रतिस्पर्धा अलग सेट गर्दछ।
← मिनी व्यवसाय कार्ड सफलताको लागि तपाइँको टिकट हुन सक्छ?
डाइ कट बिजनेस कार्डहरूका बारे तपाईलाई जान्नुपर्ने सबै कुरा